१७ औं र १८ औं शताब्दिमा चिनियाँ वस्तुहरुको युरोपमा अकल्पनीय लोकप्रियता थियो । चिया, सिल्क, चिनियाँ माटोका भाँडा तथा आकर्षक फर्निचरहरु आयात गर्न उनीहरु हुरुक्क हुन्थे । अङ्ग्रेज, फ्रेन्च र डचहरुको बगैंचा सजावटमा कलात्मक चिनियाँ प्रभावहरु देखिन्थे ।
युरोपेली प्रबोधन युगको लामो कालखण्ड कन्फुसियसवादको दर्शन, अपेरा र नाटकहरुको शैली तथा कर्मचारीतन्त्रमा योग्यतातन्त्रको चिनियाँ अवधारणाले प्रफुल्लित थियो ।
१८ औं शताब्दिको अन्त्यसम्ममा फ्रान्सेली क्रान्तिका आर्दश, भोल्टेयरका विचारले प्रभावित रोबिस्पियरका कार्यहरुले प्रबोधनकालीन दृष्टिकोणहरुलाई अझ कडा र नयाँ, विशेषतः उत्तर–नेपोलिनिक युगको भूराजनीतिक यथार्थहरुतिर मोडिदियो । यससँगसँगै चिनियाँ वस्तुका पुराना प्रसंशकहरुले तिनलाई नयाँ आँखा शंका र प्रश्नहरुको आँखाले हेर्न थाले ।
त्यसको केही दशकभित्रै चिनियाँकृत आकर्षण युरोपमा विलिन हुन थाल्यो । चीनका मध्यकालीन अधिराज्यहरुको प्रसंशाको साटो विस्तारै समग्र चीन र चीनको विश्व स्थानबारे यथार्थपरक मूल्यांकन हुन थाल्यो । चतुर आँखे युरोपेली व्यापारीहरु जो कठोर चिनियाँ अनुभवहरुबाट सुसज्जित थिए, शक्तिको करिडोरमा पुगिने, सुनिने भएका थिए । तर धेरै हदसम्म आजको जस्तै युरोपेली राजनीतिज्ञ र राजनेताहरु तिनको कुरा सजिलै पत्याउँदैनथे ।
उत्तर अमेरिकी दृष्टिकोणहरु पनि ठीक त्यस्तै थिए । थोत्रा दृष्टिकोणहरु अनौपचारिक दुश्मनीका कारण बन्दै गए । अन्ततः चीनले सशस्त्र संघर्षका श्रृंखलाहरु सामना गर्नु पर्‍यो । सन् १८३० तिर आइपुग्दा विदेशीहरुप्रति चिनियाँ धारणा जातीयता, सतही अहंकार, निन्दा र भर्त्सनाहरुले ढाकिएको हुन्थ्यो । यहाँसम्म कि सहिष्णु र निष्पक्ष पर्यवेक्षकहरु समेत चिनप्रति अनिच्छुक हुन्थे । यसबाट जे परिणाम आउँनु पर्थ्यो त्यही भयो । अर्थात् चीनले ठूलो पतन र दूर्गति सामना गर्नु पर्‍यो ।
शताब्दिऔं लामो चीनको प्रसंशा र आकर्षण पश्चिमाहरुमा घटेन मात्र, उनीहरुले चीनलाई शंका गर्ने र मन नपराउने गर्न थाले । यसको कारण के थियो त ? को थियो त ? दुबैतिर यसका कारणहरु थिए । चीनले पनि पश्चिमलाई आरोपित गर्न थाल्यो । चीनको इतिहासशास्त्रमा ‘अपमानका शताब्दिहरु’ अंकित भए । यस्तो कार्यले विश्वको एक बृहत्त परिदृष्य सामुन्ने ल्याउन सहज हुँदैनथ्यो ।
सुनियोजित ढंगले संक्रमित नश्लीय राष्ट्रवाद र विदेशी विरोधी भावना इतिहाससँगका गुनासाहरुलाई प्रत्याक्रमण गर्ने संयुक्त र नियमित चेत बने । यस्तो प्रयत्न आन्तरिक घरेलु समस्याहरुलाई ढाकछोप गर्ने उद्धेश्यसँग समेत जोडिएको थियो ।
निश्क्रिय आक्रमकता, शून्ययोग सोच, बिर्सन गाह्रो पर्ने नोक्सानीका चोटहरु, व्यवहारिक आलोचनाहरुको प्रतिक्रिया, उक्लिदो दूर्भावना, गहिरा क्षुद्रताहरु, आत्मघातको तहमा जान सक्ने तीव्र बदलाको भावना, असाधारणा दीर्घकालिन सन्दर्भहरुमा अविश्वासनीय अल्पकालिन कार्वाहीहरु– ले गर्दा चीन विरोधी आरोपहरुको एक चिरपरिचित सूची बन्यो, जो चीनका लागि ऐतिहासिक नजिर जस्ता भए ।
सन् १९५१ मा प्रकाशित अमेरिकी बुद्धिजिबी विलियम डब्लु अप्फटनको किताब ‘क्याथेको चक्रः १७ औं र १८ औं शताब्दिको बेलायतमा चीनको लोकप्रियता’ मा यी सम्बन्ध–विच्छेदका कारणहरुको बढो राम्रो चित्रण गरिएको छ । यसलाई यदि चीन बदल्न चाहन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँगको शंका, दुश्मनी र अनिच्छा छोड्ने उत्साह राख्छ भने के गर्नु पर्दछ भन्ने तुलनात्मक विवरण समेत दिइएको छ ।
सन् १९९० को तेममियान दुर्घटनापछि समकालीन अवस्था प्रतिध्वनित भयो । चीनलाई वास्ता गर्न छोडियो । मुर्झाएको चीनमा त्यही समय नयाँ चीन लहर शुरुवात भयो ।
अविछिन्न र द्रुत विकास, कल्पनै नगरिएको आर्थिक चमत्कार म्यान्डरिन भाषा आधारित विश्वविद्यालय र शैक्षिक पाठहरुप्रतिको विश्वव्यापी उत्साहले पश्चिमाहरुलाई लाग्न थाल्यो कि भोलिको चीन उनीहरुले कल्पना गरेको भविष्यका लागि सहयोगी र अवसरयुक्त हुन सक्दछ । चीनको अनुभवहीन उदयसँग फेरि पश्चिमाहरुले आफ्नो भविष्यको सपना जोड्न थाले ।
कुनै ठाउँ र त्यहाँका मान्छेलाई राम्ररी चिन्नुको अर्थ यो हुँदैन कि मान्छेले त्यसलाई विना शर्त प्रेम गर्न थाल्दछन् । गहन ज्ञान र बोधको उच्चाई कुनै अनिच्छुक स्थितिको सामना र त्यसले दिने तीता–मिठा अनुभूतिको ‘अदुवे–रोटी’ बाटै निस्कन सक्दछ ।
भ्रममा परेका पूर्वप्रेमीहरु भन्दा धेरै ठूला शत्रुहरु आज चीनका लागि देखा परेका छन् । चीनका पूर्वप्रेमीहरुले भने ती वस्तुहरुलाई उसरी नै माया गर्न थालेका छन्, जसरी शताब्दिऔं अघि गर्थे ।
चिनियाँ वस्तुहरुको मोह पश्चिमाहरुको दृष्टिकोणका पर्याप्त आधार भने हैनन् । अन्ततः फेरि पहिले जस्तै राष्ट्रिय भावना कठोर हुँदैछ । एकअर्काप्रतिका उत्तेजनाहरु तीव्र हुँदैछन् । प्रतिद्वन्द्विता मुख्य ठाउँतिर आउँदैछ । पश्चिमाहरुमा एउटा यस्तो दृष्टिकोण आम बन्दै गइरहेको छ कि ‘चीनलाई एक पटक पाठ पठाउनै पर्छ ।’
यस्तो धारणा दुःखद अन्तर्राष्ट्रिय परिणामको कारण बन्न सक्दछ जसको पूर्वानुमान गर्न सजिलो छैन ।
(द साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाटसाझापोस्टले गरेको संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद)
Cover Photo- The Chinese pavilions in Vauxhall Gardens, London, in 1751. Getty Images